Fahazavana - Inona no dikan'ny hoe mieboebo ary ahoana no anaovany izany?
Ahoana no mahatonga ny olona miboridana?
Ahoana no atao hoe fiterahana ny vehivavy?
Amin'ny ankapobeny, ny teboka manan-danja indrindra amin'ny fanasitranana dia ny maha-voajanahary tanteraka azy. Ny masturbation dia misy mihitsy aza ao amin'ny fanjakan'ny biby, ka tsy mahamenatra azy izany. Ankoatra izany, ny olona tsirairay dia olona iray tanteraka, izany hoe, tsy misy ny resipeo ho an'ny rehetra.
Inona no dikan'ny hoe masturbation?
Noho izany, ny zava-drehetra dia mahafa-po ny fahafaham-po, izay manome tombontsoa manokana, raha tsy misy mpiara-miasa. Izany dia azo tanterahana amin'ny fampiasana tanana na firaisana ara-nofo manokana, izay matetika ateraky ny erotic fantasy, literatiora, sary na sarimihetsika.
Ny fanatanjahan-tena dia manatanteraka tanjona iray manan-danja eo amin'ny fampandrosoana, indrindra ho an'ny tanora: Amin'ny fijerena ny fanirian'ny tena manokana, dia mampivelatra fifandraisana tsara amin'ny vatany izy ireo mandritra ny fahamaotiana ary hahalalany izay zavatra ilainy ara-nofo. Ankoatra izany, amin'ny fiterahana sy ny firaisana ara-nofo, ny hormones fifaliana dia navotsotra, mba hahafahany mampihena ny fihenjanana ihany koa.
Tsy mora ny miboridana ny lehilahy. Ho an'ny ankamaroan'ny lehilahy, ampy ny mamporisika ny penis mba hahatratra ny fara tampony. Ho an'ity tanjona ity dia rakotra tanana ny vatany, ny tanjaky ny famokarana dia miankina tanteraka amin'ny safidinao manokana, ary ny fihetsika sy ny fihetsika mifanaraka amin'izany dia miantoka ny fientanam-po marina.
Masturbation amin'ny lehilahy
Zava-dehibe eto ny fampiasana grefy tsara mba hisorohana ny faharatsiana. Ny hery sy ny hafanana dia mety hitombo tsikelikely, na miovaova hatrany hatrany.
Na dia izany aza, misy koa ireo antsoina hoe masturbators ho an'ny lehilahy, izay modely amin'ny vava tena izy. Ireo fasana fingotra indraindray dia mahatsapa bebe kokoa, indraindray tsy dia misy azo iainana, ary indraindray koa ampiasaina amin'ny fimailo ho an'ny fanentanana fanampiny na amin'ny vondrona kely vibrations.
Mazava ho azy fa afaka manitatra ny fahafinaretany ihany koa ny lehilahy: Ny peratra manokan'ny penis dia manakana ny rà tsy hivoaka avy amin'ny vatan'ny hevi-dravina aorian'ny fara tampony. Ny fananganana dia mijanona amin'ny fihodinana faharoa.
Tsara ihany koa ny manomana mofomamy iray, na izany aza, dia tsy voatery miditra any amin'ny trano fidiovana ianao aorian'ilay fara-tampony. Ny fomba sasany avy amin'ny fampitam-baovao, ohatra ny fampiasana paoma papila na rongony fanadiovana vaky, dia tsy soso-kevitra amin'ny antony ara-pahadiovana amin'ny fomba. Raha te hampiditra zavatra ianao, dia tokony hiditra amin'ny sextoys mety fotsiny, satria izy ireo ihany no miantoka fa tsy misy ny loza ara-pahasalamana miseho. Taorian'ny fampiasana dia tokony hadiana ny kilalao toy izany.
Fampanantenana manokana amin'ny lehilahy ny fanentanana ny P-spot, volo vitsivitsy eo amin'ny rindrin'ny tranon'ny anus. Ny lehilahy sasany dia afaka mahatsapa ho azy amin'ny alàlan'io fanentanana io raha tsy mikasikasika ny orgasma mafy ny penis - eto, mendrika ny miezaka. Na izany aza, misy fomba fiasa mitandrina tsara, satria ny anus dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fitsaboana tsy mahazatra. Mba hihaonana amin'ny P-teboka tsara, misy kilalao manokana, indraindray na amin'ny vibration.
Manampy ny fitsaboana ho an'ny fahasalaman'ny lehilahy ny fikarakarana iray hafa: Ny fakana aina matetika, na ny fifehezan-tena na ny firaisana dia manakana ny olan'ny prostaty hoavy.
Ho an'ny vehivavy, ny masturbation dia somary sarotra kokoa, satria tsy ny vehivavy rehetra avy hatrany no mamaly amin'ny zavatra sasany. Matetika dia tsy ampy ny fanasitranana madio ny faritra pubic. Tsara ny manandratra ny clitoris sy ny vagy amin'ny fotoana iray ihany mba hahafinaritra indrindra - ary, raha azo atao, koa ny G-spot miaraka aminy.
Io dia miorina eo amin'ny rindrina ivelany ao amin'ny vagina. Azony atao ny manatona amin'ny rantsantanany, fa mora kokoa amin'ny firaisana ara-nofo manokana sy mialoha. Ny tsara indrindra dia tokony hikorontana koa ireo kilalao, ary ho an'ny vehivavy ao amin'ny masturbation dia mety misy orgasme maromaro azo atao.
Amin'ny ankapobeny, tokony hampitombo tsikelikely ny hamafin'ny lamosina sy ny haingo. Ny faritra sasany erogenous ny vehivavy dia tsara kokoa manome fientanam-po, ary ny fon'izy ireo dia mahatsapa tena tsara rehefa afaka kelikely. Ankoatr'izany, ny vehivavy dia tena mando avy amin'ny sehatra iray - fa ny fiandohana dia mety ho mety amin'ny fampiasana grefy.
Vehivavy maro no mahita fanentanana hafa, ohatra amin'ny alalan'ny plug-in anal, mahafinaritra. Tokony ho miala sasatra sy hifamahofaho amin'ny loto marobe izany. Azo atao ny zava-drehetra, tsy misy zavatra tokony hatao. Ny fifangaroana dia mety ho fanentanana amin'ny fiterahana ihany koa, toy ny fanala na ny rantsan-tanana.
Misy karazana fitsaboana maro ho an'ny vehivavy. Ny diplaoma dia miakatra avy amin'ny dildo tsotra ho vibrator ho fitaovana sarotra izay ahafahan'ny vehivavy mandeha mankany amin'ny fara-tampony. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, na izany aza anefa, ny tanana roa na ny valifaty na vibrator fotsiny dia ampy.
Rehefa mampiasa tanana ianao dia tokony ho azonao antoka fa tsy manana rantsana maranitra ny rantsan-tongotra ary mila manadio ny tananao alohan'ny filokana.
Indrindra indrindra fa ny vehivavy manana fahasarotana amin'ny fananana orgasme amin'ny firaisana ara-nofo dia mahazo tombony amin'ny fahafantaranao tsara kokoa ny toerana misy azy amin'ny erogenous mandritra ny filokana. Amin'ny traikefa sasantsasany, afaka manondro azy ireo amim-pahamendrehana ilay mpiara-miasa mandritra ny firaisana ara-nofo, ny ampahany tokony tokony hamporisihany ny fomba sy hitondra azy ireo amin'ny fara-tampony.
Ny fanazavana - rafitra sy fiasa ny nono